को हुन ‘खाने लाइसेन्स’ बोकेका नेकपाका नेता ?
काठमाडौं । नेकपाका पोलिटब्युरो सदस्य डा. विजय पौडेलले मंगलबार विहानै आफ्नो फेसबुक स्टाटासमा लेखेका छन्–‘नेकपामा केही मानिसहरू आजीवन ‘खाने लाइसेन्स’ लिएर आएका रहेछन् । हरेक सरकारका पालामा यिनले खाइरहन्छन् । नेपाली कांग्रेसमा पनि त्यस्तै ‘निरन्तर खानेहरू’को झुण्ड छ । हरेक गुटबाट लाभ लिन सक्ने महानुभावहरूले नेताहरूलाई रिझाउने के जादु जानेका रहेछन् ?’ उनले यहाँ कोही नेताको नाम किटान नगरे पनि उनले कसलाई इंगित गर्न खोजेका हुन् भन्ने नेकपाका आम कार्यकर्ताले सहजै अनुमान लगाउँछन् ।
सजिलै अनुमान नलगाऊन् पनि कसरी ? यो स्टाटस त्यो दिन आएको छ, जसको एक दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो विदेश मामिला सल्लाहकारमा डा. राजन भट्टराईलाई नियुक्त गरेका थिए । ०६७ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनी नै विदेश मामिला सल्लाहकार थिए । पार्टीको नवौं महाधिवेशनताका अध्यक्षका प्रत्यासी ओली समूहको सचिवालयमा बसेर काम गरेका उनी त्यही महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटीमा आएका हुन् । त्यसलगत्तै उनलाई मन्त्रिपरिषद्ले मनोनीत गर्ने २६ जनाको कोटाबाट संविधानसभामा मनोनीत गरिएको थियो । गत निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ मा टिकट पाएर पनि उनी पराजित भएका थिए । अर्र्का ‘खाने लाइसेन्स’ लिएर आएका नेता हुन् अग्नि खरेल । उनी अहिले महान्यायाधिवक्ता छन् । अहिलेसम्म कार्यकर्ता र जनताबाट कहीँकतै अनुमोदित नभईकन लाभ लिइरहनेमा पर्छन् उनी । ०६५ सालअघिसम्म कानुनी परामर्श सेवा चलाउँदै आएका उनी पहिलो संविधानसभामै समानुपातिक कोटाबाट सांसद भए । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनका बेला पहिलो संविधानसभामा समानुपातिकबाट सांसद भएका कसैलाई दोस्रोमा नबनाउने मापदण्ड पार्टीले बनायो । तर, त्यो मापदण्ड खरेलको हकमा लागू भएन । दोेस्रो संविधानसभामा उनलाई २६ जनाको कोटामा संविधानसभामा छिराइयो । अनि केपी ओली नेतृत्वको पहिलो सरकारमा कानुनमन्त्री बने । गत निर्वाचनमा झापाबाट निर्वाचन लड्न उनले निकै दौडधुप मच्चाएपछि ओली समूहभित्रै उनलाई नराम्रो नजरले हेर्न थालियो । टिकट नपाए पनि उनले महान्यायाधिवक्ताको पद पड्काइछाडे ।
यस्तै, अर्का पात्र हुन् डा. युवराज खतिवडा । राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकको गभर्नर हँुदै अहिले उनी सरकारको अर्थ मन्त्री बनेका छन् । योजना आयोग र राष्ट्र बैंकको गर्भनर पनि उनलाईलाई एमालेले नै बनाएको हो । अर्का पात्र हुन् उदयराज पाण्डे । ०५१ सालमा समाज कल्याण परिषद्को निर्देशक भएयता उनी कहिल्यै खाली छैनन् । केपी ओली र सहाना प्रधान परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला दुवैको सल्लाहकार भएर काम गरेका उनी पछिल्लो समय साउदी अरबका लागि राजदूत भएका थिए । उनैलाई अहिले मलेसियाका लागि राजदूत सिफारिस गरिएको छ । यद्यपि, विषयगत ज्ञान र क्षमताका हिसाबले यी सबै जना अब्बल मानिन्छन् । भट्टराई परारष्ट्र मामिलाका विज्ञ नै हुन् भने खतिवडा अर्थतन्त्रका पोख्त मानिन्छन् । त्यस्तै, खरेल कानुनका निपुण हुन् भने पाण्डेले साउदीमा राजदूतका रूपमा राम्रो काम गरेर चर्चा कमाएका थिए ।